တားမြစ် ဆေးတွေ ရောင်းနေလို့ လူမှု့ ကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင် – Maythadin
တားမြစ် ဆေးတွေ ရောင်းနေလို့ လူမှု့ ကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင်
May Thadin | September 9, 2021 | Celebrity | No Comments
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တားမြစ်ဆေး တွေ ရောင်းနေ လို့ လူမှု ကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေ တဲ့ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင်
တတ်သစ်စ သရုပ်ဆောင် သီဟအောင် ဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံး အရင်က အားပေးခဲ့ကြတဲ့ လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် ဦးကိုကိုဦးရဲ့ သားချောလေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်နော်။
လက်ရှိ ကာလ မှာ သီဟအောင် သေချာမသိပဲလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု အပေါ် ပရိတ်သတ် ကြီးက စိုးရိမ် တကြီးနဲ့ အ ခု လို သတိပေး ထားပါတယ် ။ဟဲ့ တားကြ ပါ ဦး သီဟအောင် က blue mark ကြီးနဲ့ တားမြစ်ဆေးတွေ ရောင်းနေပြီ.
JFM က ဇွန်ပွင့်ထင် ရေ နင် တားမြစ်ဆေး တွေ သိပ်ရောင်းချင် ရင် စိုးမြတ် နန္ဒာ ၊စိုးမြတ်သူဇာ တို့ကို ရောင်းခိုင်းလေ ။နင်တို့ မြောက် မြန်မာ လူတွေ ကိုသောက်ခိုင်းလေ။ သီဟအောင် ကို ဘာလို့ ရောင်းခိုင်းတာလဲနင် သီဟအောင်ဖန် GenZ လေးတွေကို သေ စေ ချင်နေတာလား.
JFM bashi က တားမြစ်ဆေး ပါ ရှင်. sibutramine ပါ လို့ ရုတ်တရက် အသက် ဆုံးတတ် လို့ တားမြစ် ထား တာ ပါ ရှင် ။သေပြီးရင် bad review ထ မပေးနိုင်လို့ တကမ္ဘာလုံးက မသောက်ဖို့ တား ထားတာပါရှင် ။ လိမ္မော်/ပန်းရောင် နှစ်ခု စ လုံးပါ ပဲရှ င်။
ဒါ ကြောင့် လည်း မြန်မာ FDA မရတာပါရှင် ။ကလေးတွေ မသောက် ကြ နဲ့ နော် ။သီဟအောင် ဖန် တွေ လည်း ကိုယ့် အိုင်ဒေါ ကိုယ် တားကြလေ။ တားမြစ်ဆေး ရောင်းတာ အမှူကြီးတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင် ကြေ ငြာ ကိုယ်တိုင် ရောင်းမယ်ဆိုလည်း FDA ရှိ မရှိ စစ်ဆေး ကြပါရှင်။
ဒီပိန်ဆေး က နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ် ထိ ပြီး သေတတ် ပါ တယ် ရှင် ။သေ တတ် ပါ တယ် ။ မစားနိုင် မသောက် နိုင် ကိုယ်ခံ အားကျနေတဲ့ ကျတဲ့အချိန်ကိုဗစ်နဲ့ ငြိရင် ပို တောင် သေ တတ် ပါ တယ် ရှင်။
တားကြပါရှင်” ဆိုပြီး အားလုံးသိအောင် တင်ထားတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော်။အဆိုပါ ကိစ္စ အ တွက် သီဟအောင် က အခု ထပ်ပြီး ပြော လာ ပါ တယ်။ “အောက် က အမ ပြော ထား သလို ဘဲ ကျွန်တော် တို့ တစ် မိသားစုလုံး လည်းသုံးစွဲတယ်..
ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် သ ဘာ ကျ လို့ညွှန်းလိုက်တာမှာ အ ခု လို ဖြစ် ကုန် ကြ တယ် ..ဆေးနဲ့ ပက် သက် ပြီး တော့ အနှောင့် အယှက်နဲ့ စိုးရိမ် မှု တွေ ဖြစ် သွားမယ် ဆိုရ င်လည်းတောင်းပန် ပါ တယ်..
ကျွန်တော် တို့ က တော့ ဆက် လက် သုံးစွဲနေအုံးမှာ ပါ ခင်ဗျာ..အားလုံးကို ကျေးဇူး တင် ပါ တယ်”ဆိုပြီး သူရဲ့လူမှု့ ကွန် ရက် စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ခြင်းစီ တိုင်းလည်းကျန်းမာ ပျော်ရွှင် သောနေ့ရက်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။crd
မဂ္လာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ တားျမစ္ေဆး ေတြ ေရာင္းေန လို႔ လူမႈ ကြန္ရက္မွာ နာမည္ႀကီးေန တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟေအာင္
တတ္သစ္စ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟေအာင္ ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ အားလုံး အရင္က အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ လူၾကမ္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးကိုကိုဦးရဲ႕ သားေခ်ာေလး တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ေနာ္။
လက္ရွိ ကာလ မွာ သီဟေအာင္ ေသခ်ာမသိပဲလုပ္ေနတဲ့ ကိစၥ တစ္ခု အေပၚ ပရိတ္သတ္ ႀကီးက စိုးရိမ္ တႀကီးနဲ႕ အ ခု လို သတိေပး ထားပါတယ္ ။ဟဲ့ တားၾက ပါ ဦး သီဟေအာင္ က blue mark ႀကီးနဲ႕ တားျမစ္ေဆးေတြ ေရာင္းေနၿပီ.
JFM က ဇြန္ပြင့္ထင္ ေရ နင္ တားျမစ္ေဆး ေတြ သိပ္ေရာင္းခ်င္ ရင္ စိုးျမတ္ နႏၵာ ၊စိုးျမတ္သူဇာ တို႔ကို ေရာင္းခိုင္းေလ ။နင္တို႔ ေျမာက္ ျမန္မာ လူေတြ ကိုေသာက္ခိုင္းေလ။ သီဟေအာင္ ကို ဘာလို႔ ေရာင္းခိုင္းတာလဲနင္ သီဟေအာင္ဖန္ GenZ ေလးေတြကို ေသ ေစ ခ်င္ေနတာလား.
JFM bashi က တားျမစ္ေဆး ပါ ရွင္. sibutramine ပါ လို႔ ႐ုတ္တရက္ အသက္ ဆုံးတတ္ လို႔ တားျမစ္ ထား တာ ပါ ရွင္ ။ေသၿပီးရင္ bad review ထ မေပးနိုင္လို႔ တကမာၻလုံးက မေသာက္ဖို႔ တား ထားတာပါရွင္ ။ လိေမၼာ္/ပန္းေရာင္ ႏွစ္ခု စ လုံးပါ ပဲရွ င္။
ဒါ ေၾကာင့္ လည္း ျမန္မာ FDA မရတာပါရွင္ ။ကေလးေတြ မေသာက္ ၾက နဲ႕ ေနာ္ ။သီဟေအာင္ ဖန္ ေတြ လည္း ကိုယ့္ အိုင္ေဒါ ကိုယ္ တားၾကေလ။ တားျမစ္ေဆး ေရာင္းတာ အမႉႀကီးတယ္ေနာ္။ ကိုယ္တိုင္ ေၾက ျငာ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းမယ္ဆိုလည္း FDA ရွိ မရွိ စစ္ေဆး ၾကပါရွင္။
ဒီပိန္ေဆး က ႏွလုံးနဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ ထိ ၿပီး ေသတတ္ ပါ တယ္ ရွင္ ။ေသ တတ္ ပါ တယ္ ။ မစားနိုင္ မေသာက္ နိုင္ ကိုယ္ခံ အားက်ေနတဲ့ က်တဲ့အခ်ိန္ကိုဗစ္နဲ႕ ၿငိရင္ ပို ေတာင္ ေသ တတ္ ပါ တယ္ ရွင္။
တားၾကပါရွင္” ဆိုၿပီး အားလုံးသိေအာင္ တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္။အဆိုပါ ကိစၥ အ တြက္ သီဟေအာင္ က အခု ထပ္ၿပီး ေျပာ လာ ပါ တယ္။ “ေအာက္ က အမ ေျပာ ထား သလို ဘဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တစ္ မိသားစုလုံး လည္းသုံးစြဲတယ္..
ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္ တိုင္ သ ဘာ က် လို႔ၫႊန္းလိုက္တာမွာ အ ခု လို ျဖစ္ ကုန္ ၾက တယ္ ..ေဆးနဲ႕ ပက္ သက္ ၿပီး ေတာ့ အေႏွာင့္ အယွက္နဲ႕ စိုးရိမ္ မႈ ေတြ ျဖစ္ သြားမယ္ ဆိုရ င္လည္းေတာင္းပန္ ပါ တယ္..
ကြၽန္ေတာ္ တို႔ က ေတာ့ ဆက္ လက္ သုံးစြဲေနအုံးမွာ ပါ ခင္ဗ်ာ..အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္ ပါ တယ္”ဆိုၿပီး သူရဲ႕လူမႈ႕ ကြန္ ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ တစ္ေယာက္ျခင္းစီ တိုင္းလည္းက်န္းမာ ေပ်ာ္႐ႊင္ ေသာေန႕ရက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။crd
ဟာသ သရုပ်ဆောင်ကြီးဝက်မ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီး မော်လမြိုင်မှာ ဆေးရုံတင်ထားရ
နေခြည်ဦးကတော့ ကြွယ်ပြီးပြောလာပြန်ပြီ သူ့ကိုအားပေးနေတဲ့ chilliတွေရော ပရိတ်သတ်တွေရောရှိသေးတယ် အေးဆေးပဲဆိုတဲ့ အနေထားမျိုး စကားဆိုလာ
လွတ်မြောက်နယ်​မြေမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ကို လွမ်းနေတဲ့အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်..